Global Voices teny Malagasy » Maminavina Ny Fidarabohan’ny Vondrona Bodista Radikaly Amin’ny Sary-sy-Soratra Mampihomehy Ny Vondrom-Piarahamonina an-tSerasera ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2016 5:02 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Cebu Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika
Sary-sy-soratra noforonin'i Kyaw Wanna Htun. Milaza hoe Mandria am-piadanana, Ma-Ba-Tha (lahatsoratra ambany) ary manasongadina mpandihy nentim-paharazana.
Taorian'ny fanambaran'ny  [mg] lehiben'ny minisitra ao Yangon fa “tsy ilaina intsony” ao an-drenivohitr'i Myanmar taloha ny vondrona radikaly nasionalista bodista Ma-Ba-Tha (Fikambanam-piarovana Foko sy Fivavahana) , mihamaro ihany koa ireo manampahefana no mamoaka hafatra mitovitovy amin'izany.
Tamin'ny 12 jolay, nanambara ny komitim-panjakana Sangha Maha Nayaka avy ao amin'ny governemanta fa tsy ara-dalàna ny Ma-Ba-Tha — fikambanana moanina bodista izay manana vahoho goavana amin'ny governemanta tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay.
Nanamafy ny komitim-panjakana fa tsy hanohana  intsony ny hetsika sy ny fanambaran'ity vondrona ity.
Nitsikera  ny vondrona sy ny mpitarika azy, Wirathu,  ihany koa ny minisitry ny fivavahana sy ny kolontsaina ary nilaza fa tsy misy olona ambonin'ny lalàna na iray aza.
Tamin'ny 2012, nanao fanentanana masiaka nantsoina 969  i Wirathu, fanentanana mandrisika ny Bodista hanao ankivy ireo toeram-piasana sy fandraharahana tazonin'ny miozolomana.
Navitrika tamin'ny fanaratsiana ny vitsy an'isa miozolomana ao amin'ny Facebook i Wirathu sy ny mpanohana azy. Asian-dry zareo ihany koa ny politisiana, mpikatroka, mpanao gazety ary ireo feo tony hafa  miantsy fahazakana ara-pivavahana.
Bodista no maro dia maro an'isa ao Myanmar.
Sambany nisy manampahefana ao amin'ny governemanta ao amin'ny Ligy Nasionaly ho amin'ny Demaokrasia (NLD) no nisy niteny manohitra ny ataon'ny Ma-Ba-Tha.
Nahazo ny fahefana ny NLD tarihan'ny Aung San Suu Kyi, nahazo ny Nobel tamin'ny voalohandohan'ity taona ity.
Tamin'ny 14 jolay, nisy fikambanam-piarahamonina sivily iray antsoina hoe Thet Taw Saunt (Mpiambina) nametraka fitoriana  ho nanao fanalam-baraka an'i Wirathu noho ny fiantsoana ny mpitondra iraka misahana ny zon'olombelona avy ao amin'ny Firenena Mikambana Yanghee Lee ho “makorelina” tamin'ny 2015.
Ny hany nataon'i Yanghee Lee dia ny nanasongadina ny toeram-pahantrana iainan'ny vondrom-poko miozolomana Rohingya ao Myanmar.
Tamin'ny famaliana ny raharaham-pitoriana ny Ma-Ba-Tha, namoaka sary-sy-soratra maminavina mialoha ny fidarabohan'ny vondrona radikaly ny mpisera aterineto ao Myanmar.
Ny sary-sy-soratra eto ambany no mampiseho ny fahatsapan'ny olona amin'ny toe-draharaha misy ankehitriny :
Nalaza haingana ny sary-sy-soratra mampifangaro ny afisin'ny sarimihetsika ‘London has Fallen’ (Nidaraboka i Londra). Ilay olona eo amin'ny ankavia no mpitarika ny MaBaTha, Wirathu, izay lazaina ho WeWe ao amin'ny fiarahamonina an-tserasera. Ilay iray eo afovoany no Lehiben'ny Minisitra ao Yangon, Phyo Min Thein, izay lazaina ho Kwee Pyo, ary ny eo amin'ny ankavia dia ny filohan'i Myanmar Htin Kyaw.
Noforonina ny Ma-Ba-Tha tamin'ny taona 2014 hiarovana ny foko sy ny fivavahana bodista ao Myanmar amin'izay lazainy ho fikasan-dratsin'ny miozolomana hifehy ny firenena iray manontolo.
Nanenika ny media sosialy ny mpanohana ny Ma-Ba-Tha tamin'ny resa-pankahalana ny miozolomana sy ny mpanohitra ara-politika.
Voakiana ny eksitiremisma ara-pivavahan-dry zareo noho ny fandrehetana  fifanenjanana ara-pivavahana ao amin'ny firenena tao anatin'ny dimy taona farany.
Ny mpikamban'ny Ma-Ba-Tha ihany koa no hery matanjaka tao ambadiky ny fanentanana manohitra ny fanomezana zo ho an'ireo vondrona ara-poko Rohingya niaritra fangirifiriana hatry ny fotoana ela ao andrefan'i Myanmar.
Nanomana fihetsiketsehana  sy fivoriana maro manerana an'i Myanmar ry zareo amin'ny tokony handroahana ny Rohingya hiala amin'ny firenena.
Heverin'ny governemantan'i Myanmar ho mpifindramonina tsy ara-dalàna ny Rohingya.
Efa nofariparitan'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona ho vitsy an'isa niharan'ny fanenjehana indrindra eto ambonin'ny taona ity vondrona tsy manam-panjakana ity.
Tamin'ny 2015, nahomby tamin'ny fanerena hampandaniana  ny Lalàna Fiarovana ny Foko sy ny Fivavahana ny Ma-Ba-Tha, andian-dalàna efatra mitady fiarovana ny vehivavy bodista mametra ny mariazy finoana samihafa sy ny fiovam-pinoana raha miantso amin'ny fanaraha-maso ny mponina sy ny fanambadiana tokana.
Mieritreritra ny manampahaizana manokana maro fa manilikilika ny Miozolomana ao Myanmar ireo lalàna ireo.
Indreto ambany ireto no ohatra vitsy amin'ny sary-sy-soratra mamaly amin'ny mety hanafoanana ny Ma-Ba-Tha:
Nampiasa ny afisin'ny sarimihetsika “London has Fallen” (nianjera i Londra) ihany koa ity sary-sy-soratra ity ho faminavinana ny fandravana ny vondrona Ma-Ba-Tha. Ny vehivavy eo amin'ny ankavanana dia i Aung San Suu Kyi. Sary-sy-soratra natsangan'i Robert Tony.
Mieritreritra ny mpisera Facebook NayPaing Micheal fa tokony handray ny fanasaziana sasantsasany noho ny fihetsika mahery nataony tamin'ny Miozolomana ny Ma-Ba-Tha:
“Rehefa nampiseho karatra mena tamin'ny mpilalao noho ny filalaovany an-kerisetra ny mpitsara…ary nitondra azy hivoaka ny kianja.” Sary-sy-soratra noforonin'i NayPaing Micheal.
Ary farany, nampahatsiahy ireo mpiserasera ao Myanmar ny mpisera Facebook Via Kingag fa tsy misy ifandraisany amin'ny fiarovam-pivavahana ny Ma-Ba-Tha.
“Ka milaza izany ianareo fa ho potika ny Boddhisma, izay efa fivavahana tao anatin'ny 2500 taona…raha tsy manavotra azy ny Ma-Ba-Tha ary ho lasa firenena Miozolomana i Myanmar?” Sary-sy-soratra namboarin'i Via Kingag.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/28/85413/
 nanambara ny komitim-panjakana : http://frontiermyanmar.net/en/news/wirathu-faces-possible-court-case-as-fortunes-turn-for-ma-ba-tha
 feo tony hafa: https://globalvoices.org/2014/06/25/human-rights-open-sky-myanmar-buddhist-muslim/
 fiantsoana : https://globalvoices.org/2015/01/22/myanmars-nationalist-monk-attacks-un-envoy-in-his-speech/